RASMI: Gonzalo Higuain oo ku dhawaaqay inuu isaga fariistay ciyaaraha heerka caalami – Gool FM
(Buenos Aires) 29 Maarso 2019. Gonzalo Higuain, kaasoo ay milkiyaddiisa leedahay Juventus, isla markaana amaah ku jooga Chelsea ayaa ku dhawaaqay inuu isaga fariistay ciyaaraha heerka caalami.
Weeraryahankan, Gonzalo Higuain ayaa ku dhawaaqay inuu isaga fariistay u ciyaarista dalkiisa, isagoo sheegay inay dad badan farxad u tahay inuu isaga haro xulka qaranka Argentina.
31-sano jirkaan ayaa qirtay in sababo la xiriira qoyskiisa uu uga haray qarankiisa, waxaana uu sheegay inuu diiradda saari doono kulamada kooxdiisa.
“Xilligeygii aan la joogay Seleccion waa uu soo dhammaaday, hadda anigu waxaan xulka ka daawan doonaa bannaanka, taasoo aan hubo in dad badani ku farxi doonaan.” ayuu Higuain u sheegay Fox Sports Argentina.
“Waxaan la hadlay macallin Lionel Scaloni waana u sheegay go’aankeyga, kani waa go’aankeyga, waxaana rajaynayaa inuu ii wanaagsanaan doono, waxaan doonayaa inaan waqti la qaato qoyskeyga, waxaan doonayaa inaan waqti la qaato gabadheyda, waan arkayaa inay dhibtoodaan markaan si adag u dhaleeceynayo.”
“Anigu waan ku faraxsanahay go’aanka aan qaatay, waxaan doonayaa inaan si buuxda u joogteeyo waqtigeyga Blues.”
“Horyaalka Premier League waa mid cajiib ah, waana ku raaxeystaa xaqiiqdii, waa horyaal uu yaalo tartan aan caadi ahayn”
Gonzalo Higuain ayaa xulkiisa qaranka Argentina u dhaliyey 31 gool 75 kulan oo uu saftay.